नेपालमा किनिएका मोवाइल सेट बन्द हुँदैनन्, हराएमा खाेज्न सजिलाे (हेर्नुहोस् भिडियोमा) - Nepalese Times
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 40 मिनेट अघि
आज राति पनि यी ठाउँमा हिमपातसहित भारी वर्षाको सम्भावना, मौसमविद्ले दिए यस्तो चेतावनी 21 घण्टा अघि
दाबी नगरेर मात्रै हो, गिनिज बुकको आधा भाग त हामीले गरेका कामले भरिन्छ – केपी ओली 23 घण्टा अघि
नेपालमा किनिएका मोवाइल सेट बन्द हुँदैनन्, हराएमा खाेज्न सजिलाे (हेर्नुहोस् भिडियोमा)
नेप्लिज संवाददाता २ श्रावण २०७८, शनिबार ०५:५९ (3 महिना अघि) ३७५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं, । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेबाट विदेशबाट अवैध रुपमा ल्याइएका मोवाइल सेट चलाउन नमिल्ने नियम लागू गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू भएपछि कुन मोबाइल सेट वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सकिने र अवैध मोवाइल सञ्चलन बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो प्रणाली तथ्याङ्कका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । यसमा राखिएको मोबाइल तथ्याङ्कले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउने छ । प्राधिकरणका अनुसार हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ ।
मोवाइल डिभाइस मनेजमेन्ट सिस्टम शुक्रबारदेखि शुरु भए पनि यस अघि आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल सेट भने तत्काल बन्द नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो प्रणाली लागू भए पनि नेपालमा चलिरहेका कुनै पनि मोबाइल बन्द नहुने तर नेपालबाहिर किनिएका वा उपहार पाएका मोबाइल दर्ता गराउन निश्चित समय दिनेछ । उक्त अवधिमा पनि दर्ता नभएका मोबाइललाई वर्गीकरण गरी प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिने वा बन्द गर्ने काम गरिने जनाइएको छ ।
कुनै फोन विदेशबाट किनेर वा उपहारका रूपमा आएको छ भने त्यस्तो मोबाइलको मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा वैधानिक रूपमा बिक्री भएका मोबाइललाई वैधको सूचीमा राखेर अन्य मोबाइल डिभाइसको वर्गीकरण थालिनेछ ।
प्राधिकरणको वेबसाइटबाटै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरसहित एउटा सरकारी परिचयपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । यसबाहेक आफ्नो माोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता छ कि छैन भनेर जाँच्ने सुविधा पनि त्यहीँ हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
फेसबुकको नाम फेरिने, के नाम राख्ने तयारी ?
बाढी पहिरो प्रभावितहरुलाई यथाशीघ्र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग नेता शेखर कोइरालाको माग
बाढी पहिरोमा परी ७७ को ज्यान गयो, कहाँ कति ? (विवरणसहित)